Lohandohan’ny mpisorona HVM Maro no hahita raharaha
Olana atrehan’ny firenena Izao no tena ilàna ireo mpanefoefo sy matanjaka
Tena mafy amin’ny Malagasy ny fepetra raisina mba tsy hiparitahan’ny valan’aretina coronavirus.
Rina Ranaivo-Harisoa Ratsy mpanolotsaina ny filoha
Mitondra ny fahitàny ny fivoaran` ny toe-draharaha eto amintsika ny mpahay lalàna no sady mpamakafaka politika, Rina Ranaivo-Harisoa, amin` izao fiatrehana ny COVID-19 izao.
Mbola Rajaonah, Claudine Razaimamonjy, Hugue Ratsiferana, Anthelme Ramparany, Henri Rabary Njaka, Harry Laurent Rahajason na Rolly Mercia, Jaobarison Randrianarivony,
Beboarimisa Ralava, Ulrich Andriantiana, Jaona Randriarimalala, tompon’andraikitra ambony sy minisitra teo aloha,… ireo no isan’ny voatonontonona fa hataon’ny fanjakana Rajoelina fahirano hoenti-mampiseho fa miady amin’ny kolikoly sy mampanjaka ny tany tan-dalàna. Izay tsy madio na nanao zavatra hafahafa azo kitihina hanenjehana azy dia hahazo fampiantsoana hatao fanadihadiana ary mety hiafara amin’ny fiazonana vonjimaika any m-ponja mihitsy, toy ny nahazo an’i Mbola Rajaonah, izay miandry fitsarana. I Hugue Ratsiferana moa dia voaheloka higadra 18 volana sy onitra. Rtoa Claudine Razaimamonjy, dia manomboka fohazina ny dosie sasany, ary nafindra natao andrimaso etsy Antanimora. Atoa Rolly Mercia dia anisan’ireo nolazaina fa nanohintohina ny fiandrianam-pirenena tamin’ny tolon’ny fahamarinana ireny. Toa misy ny efa lasa any ivelany. Mbola mety misy hafa efa tena mandeha ny fanadihadiana ifotony. Notadiavina tao an-tranony ny faran’ny herinandro teo ny minisitry ny angovo teo aloha Henri Rabary Njaka. Eo aloha ny fanapahan-kevitra mety tsy nifanaraka amin’ny lalàna sy ny fitantanan-draharaham-panjakana tamin’ny fitondrana teo aloha, fa eo koa ny fikirakirana vola be. Nisy mantsy ireo mampanahy satria lasa mpanankarena tampoka rehefa minisitra na koa lasa depiote. Voatonontonona amina raharaha fanondranana andramena ny sasany, ary misy ny efa niantsampy haingana tany amin’ny MAPAR tamin’ny fifidianana filoha ka ho afa-maina ve ? Na voizina aza ny mety ho fampanjakana ny tany tan-dalàna, dia tsapa sy tsikaritra ho mifono valifaty politika ihany manampy izany. Maro ny vahiny mpanao afera be sy kolikoly eto, fa tsy mbola nandrenesana fanenjehana satria mety mahatolotolotra ny mpitondra. Ny samy Malagasy ihany no mifamotika eto. Tsy miteny velively hoe avelao hanjaka ny tsy maty manota, fa kosa tokony ho eo ambany fifehezan’ny lalàna ny rehetra fa tsy asiana tombo sy hala.